#BlackLivesMatter: INDLELA YOKUZIPHATHA NOKUFUNDA KWEMALI NGOKUGQIBELA KWENZAKALAYO JORDAAN IQHAWULE I-DUG SAFA KU-HOLE - I-Fifa Colonialism
YILETHE! I-INFANTINO IFUNA UKUSHESHELA UMShushisi Okhethekile…
IBANANA REPUBLIC: ISWISIS INKOHLAKALO YOKULWA NEZOMTHETHO…
WWC2023 SHOWDOWN SHOWS WHO WIELDS POWER PHAKATHI INFANTINO…
IFOOTBALL YASENINGIZIMU AFRIKA IYAQHUBEKA NOKOMOYA KAKHULU
OKUPHELA: INFANTINO TELEPHONES TRUMP YOSIZO KUMI WAKHE…
ISIPROFETHO SEBILITY: INFANTINO YAYINGENANHLOSO YOKUSULA KWABO ...
UKHETHO LWE-CAF 2021: ISIKOLE NOMA UKUFAKAZA UKUNGCWABA…
EMILIO GARCIA SILVERO: HLANGANA NOMUNTU OBULELWE KU…
ISIKHATHI SESifikile UKUQALA UKUCABANGA NGE…
I-UEFA NE-CONMEBOL BAKHIPHA UMBANGANO WABO OMUSHA…
UMBHALO WOKUQHAWULA WE-AHMAD NE-FIFA WENKOLO Yase-Afrika
IFIFA Ithumela IZIMPAWU EZIYINGOZI KAKHULU KUCAF &…
I-CAF IPHELELE NGOKUPHELELE FOUZI LEKJAA KA MOROCCO…
UFELE UKUFIKA: Funda ukuthi Icala likaMusa Bility…
I-UEFA NE "MAZWE AMANCANE" IPARADOX EFIFA
IBANANA REPUBLIC: ISWITZERLAND IKHOMBISA UMHLABA UKUTHI kungani iYurophu
INFANTINO DESPERATION MANJE UBUFAKAZI E-TRINIDAD & TOBAGO…
OKUPHAKATHI: IMINININGWANE YEMOTO EFIHLA ITHENGA NGE…
Lalela Amazwi Okugcina Ka-Amr Fahmy Njengaye…
I-FIFA Iyaqhubeka Ukulimaza Ingozi Nokulimala…
NGUBANI OZOHAMBA IVOTI LOKUTHEMBEKA E-INFANTINO E-SEPTEMBER 18 IFIFA CONGRESS?
ISITHEMBISO SEBILITY: I-INFANTINO yayingenaso isisusa sokujezisa NGEMVA KOKUGCINWA KWAMANDLA
UKUVULA! U-INFANTINO UQHAWULA ISIKHALAZO SOKUTHENGA KAKHULU STEFAN KELLER UKUZE SIQEQESHE
UBULUNGISA BESISEKELA BUZOBUYELA KUFIFA NGEMPELA EMFIFA UMA INFANTINO IQHAFA UKUQHUBEKA
UKUKHETHA KWESIBILI ngo-2021: ISAKHIWO ESIBONAKALAYO NOMA UBUFAKAZI BOKUVUKELWA
EBANANA RepublicIC: IZIMPAWU ZOKUQHAWULA IZILWANE ZOKUGCINA
I-EMILIO GARCIA SILVERO: HLANGANA NOMUNTU UKUZE ALELE IMIBHALO KUSHUMAYELI WEZOBUCHWEPHESHE STEFAN KELLER
IBANANA RepublicIC: I-SWITZERLAND IQHAZA UKUQEDA ISIPHAKAMISO SEZOBUCHWEPHESHE KANYE NOKUZIPHATHA KWAMAHHALA
ISIKHATHI SISEKUQALILE KOKUQALA KOMCABANGO WEZWE NGAPHANDLE kweFIFA
I-UEFA NECONMEBOL BATHELA UKUZIPHATHA KWABO KUSHAZA ISINYAMA
Ikhaya	Amazwana	#BlackLivesMatter: INDLELA YOKUZIPHATHA KANYE NEZIMALI ZEMALI ZAKWAJANE JORDAAN ZIHAMBISE I-DUG SAFA KU-HOLE
#BlackLivesMatter: INDLELA YOKUZIPHATHA KANYE NEZIMALI ZEMALI ZAKWAJANE JORDAAN ZIHAMBISE I-DUG SAFA KU-HOLE
ebhalwe ngu admin June 7, 2020
Le ndatshana iyatholakala nangezilimi ezilandelayo:
Imibhikisho ye #blacklivesmatter e-US kuleli sonto eledlule isinikeza isizinda esishayayo lapho sizoqhubeka khonard ukufakwa kwesivumelwano sethu sombiko obhalwe ukuthi “Izinselelo Zokubusa kwaSAFA” obabhalwa yisikhulu esiphezulu seSouth African Football Association (SAFA), uDennis Mumble.
I-FIFA, inhlangano ephethe uSG Mme. UFatma Samoura udedele iqembu lakhe elilwa nobandlululo ngokwenzelela ngokwedlulele, kuleli sonto licacisile isikhundla salo mayelana nemikhankaso yokulwa nobandlululo eyenziwa emhlabeni wonke amakilabhu weFIFA nabadlali ngokweseka uGeorge Floyd owabulawa.
I-FIFA ibilokhu ibamba ukuthi izimpawu zezepolitiki kanye neziqubulo zokugqoka ezisemthethweni bekungavunyelwe, kodwa kubonakala sengathi kwenziwe okuhlukile kuleli cala, zithi "kuzokwesekwa noma yimuphi umkhankaso ozoyeka ukucwasana" ngaphambi kokungeza ukuthi "iFIFA iyabuqonda ubunzulu be imizwa nokukhathazeka okuvezwa ngabathandi bebhola abaningi ngenxa yezimo ezibucayi zecala likaFloyd ”…
USamoura, ngesikhathi sokuhlakazisa umsebenzi wokulwa nobandlululo eminyakeni engu-3 eyedlule, wayekusho ngokugqamile ukuthi umsebenzi wawo wenziwa futhi ukucwasana kwabantu bekungasekho unomphela, nomhlaba ungcono.
Cabanga ngomkhankaso wezindaba zokuxhumana kuleli sonto eledlule, lapho iFIFA izama ukuzivumelanisa nomqondo ojwayelekile womhlaba, okubonile ukuthi bonke abaholi abaphezulu beMhlaba banesisindo ngasohlangothini lokulwa nokucwasana futhi izigidi zikhombisa emigwaqweni yize kubhebhethekile ubhubhane.
Abadlali abahlukahlukene ngobumbano noGeorge Floyd obulewe.
Ingabe i-FIFA kaGianni Infantino kufanele ihlale ibanjwa ngasohlangothini olungafanele lomlando?
Kepha ukucwasana ngokobuhlanga ezwenikazi lase-Afrika kudabukisa kakhulu kunendlela obekucatshangwa ngayo.
Ukushayela uMongameli weSAFA uDanny Jordaan isimilo esibuhlungu kungaba yinto engezansi.
Ukwenza isibonelo nje, ngo-Agasti 2017 waqokela umphathi wakhe, uDennis Mumble, wamtshela ukuthi amaSekela kaMongameli e-SAFA, uLucas Nhlapo, no-Elvis Shishana bakhala ngaye bethi iSAFA inenkinga yokuqonda njengoba laba bantu bobabili behlala begqanyiswa kwabezindaba. Izingxoxo ezisanda kwenziwa zaba ngezohlanga oluxubile.
Labo bantu bomjaho obuxubile kwakunguyena (uDanny Jordaan) ne-CEO yakhe uDennis Mumble.
Ngokusobala uJordaan wayefuna ukuthi uMumble anciphise ukubonakala kwakhe kwabezindaba ngecala lokuthi i-VP izoqhubeka nokukhononda, isimangalo sokuthi zombili iVPs zaziphika ngokuqinile ukuthi zake zenziwa, lapho zibhekana nazo.
Yibaphi abantu ababili abagunyaziwe kakhulu e-SAFA, abezindaba abangathola kubo ulwazi olubalulekile lobuchwepheshe nolunye ulwazi, uma kungenjalo i-CEO noMongameli?
Kepha kuleli cala, uMongameli ubonakala sengathi ufuna ukususa i-CEO ekubonakaleni eza ngokuzenzakalelayo nesikhundla sayo, okusho ukuthi uMongameli uthathe yonke indima yokusatshalaliswa kolwazi e-SAFA, ngisho nemininingwane ebalulekile yobuchwepheshe engeyona eyakhe.
UMumble akakaze amenywe engqungqutheleni yabezindaba noma isithangami sokuhlela esenziwe nguMongameli - noma ngabe izingqinamba uJordaan axoxa ngazo nabezindaba zibandakanya izibopho ze-CEO.
UMumble uphinde wabizwa nguJordaan's PA ukuthi ahlangane naye eFun Valley lapho akhubeke khona engqungqutheleni yabezindaba ebisethelwe ngokuphelele, ukuhlinzeka ngemibono yokufinyelelwa kweNhlangano konyaka wekhalenda low-2017.
UJordaan wethule isethulo esibi, esilungiselelwe nguMnyango Wezokuxhumana, esiveza izindaba eziningi zokuphatha. UMumble wayengakaze abonisane, futhi angaziswanga ngale nkomfa yabezindaba, kwathi lapho ecelwa ukuthi ajoyine uJordaan etafuleni eliphezulu, wenqaba njengendaba yemigomo.
Esikhundleni salokho, uJordaan wabiza uNksz Nomsa Mahlangu, owayeyilungu le-NEC nekhomishini yomdlalo weCAF, ukugcwalisa isihlalo esingenalutho esasiseduze namanye amalungu aMkhandlu ambalwa nawo abekhona, esimemweni sakhe.
Lesi sinqumo sasiphindwe kabili, okwakungokokuqala ukuthi kusetshenziswe uNksz. Mahlangu njengepropathi, ngoba ungowesifazane nowesifazane onsundu, kuzothathwa njengoyilungu le-SAFA elidingekayo ngokobulili nobuzwe, ngaphandle kokuba yena usongo lwezepolitiki kuJordaan osikhumba esincane.
Isizathu sesibili, esivezwe nguJordaan bekuzoba ukuzama esidlangalaleni ukuphoxa nokuhlukumeza uMumble emehlweni amalungu e-NEC nabezindaba, ngokumenza abe khona njengoba ethula inkulumo yakhe efana nengane kwabezindaba.
Ukutshelwa ebusweni bakho ukuthi awukwazi ukufeza amandla akho ngokwesisekelo sombala wesikhumba sakho kuyinto engenangqondo ngokweqile futhi engafanele ukusho kumuntu wobuzwe obuhlangene kwiRainbow Nation ngokususelwa kumlando wayo obuhlungu, futhi ucabange ukuthi UMumble unobufakazi obuqinile bokulwa nobandlululo okwaholela ekudingisweni kwakhe kweminyaka engu-18.
Nomsa Mahlangu: Isetshenziswe njengesiphakamiso sikaMongameli weSAFA uJordaan.
Ngabe uDanny Jordaan wayesaba kakhulu ukuthi zona kanye izimfanelo nendlela ezamenza waheha kakhulu izihlalo zebhola ezisezingeni eliphezulu kuleli lizwe ngaphezu kweminyaka engama-25 ziyefana kakhulu nalawo atholakala eMumble (kufaka phakathi ukuba ngumjaho oxubekile) nokuthi lokhu kwenza uMumble usongo olukhona kubongameli bakhe?
UJordaan ofanayo, ngenkathi esebenza njenge-CEO yeSAFA kanye neSAC ye-2010 10, wabhala ngasese incwadi eya ku-FIFA SG uJerome Valcke ngoDisemba XNUMXth Ngo-2007, imgunyaza ukuthi akhokhe imali yokufumbathisa ngaphambi kwamalungu ekomidi eliPhethe leFIFA kulokho okwakulindelwe ukwesekwa kwezezimali kweFIFA okulindelwe ngesikhathi seNdebe Yomhlaba wonke yeFIFA ngo-2010.
Ngenkathi uMongameli weSAFA ngaleso sikhathi uDkt Molefi Oliphant esezobhala incwadi egunyazwe yi-LOC ezinyangeni ezimbalwa kamuva, wagcina ezwe ngencwadi yeJordaan eminyakeni eyalandela, kusukela ekwehlulekeni kweFIFAgate futhi washaqeka nangaphezu kokuphindeka kukaJordaan lapho efunda lelo FIFA SG Valcke elalinalo, ngencwadi yencwadi kaJordaan yeziphathimandla, selivele likhokhe ngaphezulu kwezigidi ezintathu zamaRandi ngenhloso yokufumbathisa eyizigidi ezingama- $ 3.
Ngoba wayenethuba lokwehlisa isithunzi uMongameli wakhe we-SAFA ngenkathi esebenza njenge-CEO, uJordaan uhlala epharanoya lokuthi abanye bazomdicilela phansi.
Kepha lokho akugcini lapho ubuhlanga bakhe buphela khona, uJordaan esebenzisa umbala wesikhumba zombili njengesihlangu ne-Assegai (umkhonto ojikijelwe owaziwa yiNkosi yamaZulu uShaka).
Ngesinye isikhathi ngasekupheleni kuka-2008, uDanny Jordaan (njenge-CEO yeSAFA neSA 2010 LOC) waqala imizamo yakhe 'yokuhlanza' iSAFA ukuze aqinisekise ukuthi "iNdebe Yomhlaba wonke izosetshenziselwa ukuzuzisa ibhola laseNingizimu Afrika."
Izinkulungwane zamalungu e-SAFA awuthathe ngokungathí sina lo mlayezo futhi ajoyina umzamo. Bakholelwa ngokweqiniso ukuthi ubuholi obusha buzothuthukisa amazinga amakhulu entuthuko, ubuchwepheshe obusezingeni lomhlaba kanye nobuholi obuthobekile kwikhodi yezemidlalo enkulu yezwe.
Umgomo obalulekile owamukelwa wubuholi obusha ukuthi inzuzo yeNdebe Yomhlaba wonke yeFIFA ka-2010 akufanele isetshenziselwe ukuzuzisa abantu abathile njengoba inkonzo yebhola bekulokhu kungokuzithandela. Wonke umuntu wabonakala ekholelwa kule nqubo.
I-SAFA ibisazoshiya inkolo yobuntu eyayithambisa ibhola laseNingizimu Afrika ngeminyaka yama-80 nama-90s, ngochungechunge lwamaphrojekthi wentando yeningi, njengokuthi, ukuzibandakanya okuningi naMalungu e-SAFA, kwakha uhlaka oluluqine kakhulu lokulawula futhi luhambisane nemithetho yeSAFA nayo lezo zeMigomo yeFIFA.
Ithuba lezezimali laba yisizinda salo msbenzi omusha, lapho i-EY yaqokwa ngo-2012, ngokwesicelo sikaDkt Jordaan, kwafakwa enye notch esigxotsheni esihle sokubusa.
Kodwa-ke, ngenkathi uJordaan ethatha izintambo njengoMongameli weSAFA kusuka ngonyaka we-2013, ukubusa okuhle nokusebenza kahle kwaqala ukubuyiselwa emuva ngokuqhubeka nokulinganisa ngemithetho nemithetho yeSAFA ukuze kuqhutshekwe nokusebenzelana nabaphikisi.
Ukuzilondolozela manje sekuwuphawu oluvelele lobuholi eSAFA - kugcinwa ngohlelo “lobuholi obunenzuzo” ngendlela yezabelo zakwamanye amazwe ezinenzuzo nokutholwa kwezimoto zamalungu oMkhandlu.
Mercedes Benz C-class: Amalungu e-SAFA NEC abolekwe.
Ngokulindela ukhetho lwango-2013, uJordaan wayeqinisekisile ukuthi kwehliswe iBhodi leNdebe Yomhlaba wonke yeFIFA ka-2010 kanye neSAFA NEC (empeleni abantu abafanayo kuzinhlangothi zombili) ukuthi kufanele bathenge izimoto zeC-Class Mercedes Benz zamalungu akhethiwe we-NEC (labo ubengakaze asebenze ku-2010 FIFA World Cup LOC Board) ngemali engaphezulu kuka-R160million evela kwisabelomali se-LOC sika-USD423m.
Amalungu abe esecelwa ukuba abuyisele "imali mboleko" yalezi zimoto zeMercedes Benz ezivela kwi-honaria yawo yonyaka ngenkathi zise-SAFA NEC, bese zibuyisa enye imali esele uma kungukuthi ziphinde zakhiwa kwi-NEC ngonyaka ka-2013.
Ngemuva kokuthi iqembu lokuqala labazuzi bezimoto lingakhethwanga kabusha njengendoda, uJordaan waqinisekisa i-NEC ukuthi idlulisele imali mboleko kumalungu asanda kukhethwa e-NEC, kanye namalungu ambalwa asele eqenjini lokuqala, ukuthi athenge izimoto zeC-Class Mercedes Benz nabo. Izimo bezizofana nezeqembu lokuqala.
Empeleni ucele amalungu eNC asanda akhethwa ukuthi azivumele ukuthi abolekwe izimoto zeC-Class Mercedes Benz… ubani ongathi cha?
Lokho kuqhubekisela phambili isikhundla ezikhundleni ze-NEC njengoba kwenzeka enhlanganweni Iningi Lezinhlangano Zase-Afrika njengamanje. UJordaan wacabanga ukuthi ezokuhamba ngokufanele zingenye yezithiyo ezibaluleke kakhulu ekuthuthukisweni kwebhola ezweni lonke nokuthi izifunda kanye naMalungu e-NEC zidinga ukunikezwa ezokuhamba ezifanele ukusiza emizamweni yazo yokuthuthuka.
Futhi yilapho lapho kucace khona ubuhlanga obucashile, u-Jordaan akazange acele i-NEC ukuthi ivume ukubolekwa kwemali amalungu ayo angakwazi ukukuthola ngokwawo, ngokwesibonelo, ukuthenga ikhaya elinjenganoma yimuphi umuntu onengqondo, esikhundleni salokho athole imalimboleko "yempahla" lokuhleba ”…
Ukube uJordaan wayenguMongameli weNyunyana Yabashokobebe yaseNingizimu Afrika, ngabe wayehlongoza ukuthi enze lo msebenzi ongaxekile, owonakalisa imali?
Sigcizelela inkolelo emhlophe yokuthi uthatha inkawu ngokubeka okuthile okucwebezelayo enkambeni enendawo ephansi, lapho inkawu ingena futhi ibambe into ecwebezelayo esinqeni sayo, ayikwazi ukuyikhipha ngoba isibhakela sibanzi kakhulu ukuvuleka okuncane, futhi ngemvelo yayo, ngeke kuvume into ecwebezelayo, kuholele ekubanjweni kwayo.
Indlela yokubamba inkawu!
Emfanekisweni ongenhla, uJordaan ungumzingeli omhlophe, amalungu akhe e-NEC ayizinkawu ngenkathi izimoto ze-C-Class Mercedes Benz ziyizinto ezicwebezelayo kumuntu ogayiwe (SAFA).
Uma wenze ucwaningo ngesimo sezimoto zakwaMercedes Benz namalungu e-NEC angaphambili, amathuba ukuthi ama-90% awasasebenzi, ngakho-ke ancipha futhi awabonakali.
Isicabha seminyaka emine siguqukela kwiSAFA NEC kanti lezi zingqwembe ziphume nohambo lwangaphandle oluncane nokuyinto ebibolekiwe iMercedes Benz!
Kodwa-ke iSAFA ibizabalaza ukuqoqa izilinganiso okungenani zamalungu ayi-5 we-NEC kusukela ngonyaka ka-2009 kuya kowezi-2013 - naphezu kwemizamo eminingana yokuqoqa imali nezinsongo zokuthatha izinyathelo zomthetho ngakubo.
Eqinisweni, uJordaan ungenelele ngasese ezimweni eziningi ukuvimbela ukusebenza kwabo ngenkathi ekhokhela izindebe zomhlangano emihlanganweni yoMkhandlu, efuna ukuthi iSAFA iqoqe imali esele esele nganoma iyiphi indlela engenzeka.
Ngokulindela ukhetho lwe-snap 2018 (kwakusho ukubamba abaphikisi bangaqaphi) nangokuzenzakalelayo okuningi okuvela kumalungu e-NEC ngaphambi kuka-2013 ne-NEC yamanje, uJordaan ulindele omunye en masseukuphuma kwamalungu e-NEC, futhi wayedinga ukuthi amasheya amasha aboleke imali mboleko entsha.
Ngakho-ke ucele uSihlalo weKomidi lezezimali (uMnu Mokoena), ukuthi axoxisane nabathengisi bezimoto abaningana ngesivumelwano sokuthengwa kwabaxhasi, noma kunjalo akekho noyedwa ozothinta i-SAFA ngesigxobo sezinyawo eziyishumi ngenxa yomonakalo odalwe ukwembulwa kuka-2015 ukufumbathiswa nge-FIFA $ 10M, izinsolo zokudlwengula ezibhekiswe kuJordaan yilowo owayeyilungu le-ANC ePhalamende uJennifer Ferguson.
Okubi kakhulu, ngalesi sikhathi imali yakwaSAFA nayo ibibanjelwe phansi futhi iNhlangano ibilwela ukuhambisana nokukhokhelwa kwabakweletwayo, futhi azikho nezinkampani zezimoto ezihlinzeka nge-SAFA ngaphandle kwemali kuphela.
Kunoma yikuphi, ngesikhathi uJordaan noMumble bethatha izintambo e-SAFA njengoMongameli kanye ne-CEO ngokulandelana ngonyaka we-2013, le nhlangano yayivele inesikweletu semali engu-R30M eyayikade inqwabelana iminyaka ethile ngenxa yokungaqondakali kwemibono ye-hare-braised like ukuthenga amalungu e-NEC izimoto zakwaMercedes Benz.
Yize i-CEO ivuma uhlelo lokuguqula iminyaka emithathu oluvunyelwe yikomidi lezezimali ukusula le nkinga, uJordaan uzophoqa iSAFA ukuthi yenze enye imali engakhokhelwe uma ifuna lokho.
Isibonelo, ku-2014-2015 FY, Umqeqeshi Oyinhloko weThimba LeSizwe Lesikhulu-u-Elifra Mashaba- wagxila ekusebenziseni izindiza ezifakwayo kulo lonke iqembu, okwenza lokho kunciphise izindleko zokuhamba zeqembu. Ngenkathi uMumble enqaba ukwenza lezi zindleko, uJordaan, ongenelela futhi wagcizelela nokuthi iSAFA isishayele indiza ngokwesicelo soMqeqeshi.
Owayengumqeqeshi we-SA u-Ephraim Mashaba: Izidingo ezihlanyayo.
Ngawo lowo nyaka, yona le Nhloko yoMqeqeshi efanayo yafuna ukubambana ngeziqu zempi nomholo wakhe owenqatshelwe nguMumble, kodwa uJordaan wakugcizelela ukuthi uyaphinda acabangele izindleko zokuphindisela komqeqeshi uma edlalela umphakathi ngalolu daba.
Ngokwengeza kulokhu, izindleko ezingabaliwe ezingekho emthethweni ezingama-R396,000 kwizibonelelo zansuku zonke zabaNtloko Bokudluliselwa, cishe u-R3 million wokubamba iqhaza kweQela Labesifazane Abadala kuZwelonke kwiNdebe yaseCyprus engenasidingo, isidingo soMqeqeshi Wabaqeqeshi Beqembu Lesizwe Labantu Abesifazane Abadala ukuze alethe Umsizi Wangaphandle Umqeqeshi ngenani lika-R1.4million…
Lezi zindleko ezingahleliwe zacishe zayiqeda insalela enempilo ebihlelele ukunciphisa ukuncipha kwemali eqoqiwe.
UJordaan uhlangana nomuntu ongenayo i-mettle yokuhlala nabalingani bakhe futhi abachazele iqiniso elibi lezezimali, abatshele ukuthi inhlangano isendleleni ehlukile.
Umuntu-ke angalindeleka kanjani ukuba ahole le nhlangano eyinkimbinkimbi kakhulu?
UJordaan uyehluleka ngisho nokuhlukanisa izindima zakhe ezahlukene zezepolitiki neHhovisi likaMongameli weSAFA, okungenye yezizathu eziningi ukuthi amazwe amaningi akhiphe isinqumo sokuthi noma ngubani ophethe iHhovisi likaMongameli webhola ngeke akwazi nokuma ezepolitiki.
Ngenkathi uJordaan eqokwa yi-ANC ukuba abe yiMeya ePhetheyo eNelson Mandela Bay ngonyaka ka-2015, wayesabugcina ubuMongameli beSAFA.
INelson Mandela Bay nayo ivele yaba yingxenye yalabo abakweletwa yiSafa ngale ndlela. U-R2.8 million ngeqhaza labo ekusingatheni i-AFCON ka-2013, kwathi lapho eba yiMeya, uJordaan waphikelela ekutheni iSafa iqoqe isikweletu, yaze yacela iNhloko yezokuPhepha yeSSA, iProtocol & Accreditation, ukuba ixhaswe njengeChief of Staff .
Yile ndoda eyayinikezwe umsebenzi wokuxoxisana nemenenja yedolobha mayelana nalesi sikweletu, yasibonga. UMumble wabe eseya kuJordaan ukuyokhipha imali leyo kodwa washaqeka lapho uMengameli weSAFA cum Mayor emhlukumeza ngobandlululo olwedlulele, emtshela ukuthi ngeke akhokhe leyo nkokhelo njengoba seluvele seluvumile isabelomali, futhi into yomugqa we-SAFA yayingekho .
UJordaan njengeMeya yaseNelson Mandela Bay: Ukushayisana kwezintshisekelo.
Ngokusobala, uJordaan uyayibona isabelozimali sezindima zakhe zezepolitiki kodwa angazinaki lezo zeSAFA, kunjani kulo mlisa? Ukuwohloka komqondo?
Ngemuva kokubamba iNdebe Yomhlaba wonke yeFIFA ngo-2010, iNingizimu Afrika isingatha i-AFCON 2013 neChAN 2014, ubungafunga ukuthi lokhu kwanele eNhlanganweni eboshelwe imali kodwa cha, uJordaan ngokungaziphathi uzibophezele i-SAFA ukusingatha umqhudelwano we-Africa Futsal Championship ngo-Ephreli 2016. I-CAF njengoba iCAF ingakwazanga ukuvikela omunye umgcini kulo mqhudelwano.
Ngokungafani nesakhiwo somqhudelwano weFIFA lapho ithimba elilawula ibhola lomhlaba lifika linezabelomali zazo zayo yonke imincintiswano yalo, izindleko zomqhudelwano weCAF zithwalwa ngumbambeli kuphela, futhi uma kungekho ukwesekwa nguHulumeni, iSAFA kwadingeka ithole imali yokuxhasa lo mthetho. .
Kodwa-ke, uJordaan wayefuna ukungenela ukhetho loMkhandlu we-FIFA esifundeni sase-Anglophone e-Afrika futhi izifiso eziyimpumputhe zamphoqa ukuthi aphaphamele umoya maqondana nezimali zeSAFA.
Emqondweni wakhe, ukusingathwa kwalo mqhudelwano eNingizimu Afrika kuzohambisana nokuvotelwa kwesihlalo soMkhandlu weFIFA, futhi ubona ukuthi ukubamba amandla kuzohola amavoti ngendlela yakhe.
Ngeshwa, ikomidi le-FIFA Ethics lenqabile ukusula abantu abangu-3 kulolo khetho, okungoChabur Goc (South Sudan), Kalusha Bwalya (Zambia) noDanny Jordaan (South Africa) ngenxa yophenyo oluqhubekayo.
Ngaleso sikhathi, uJordaan ubengasolakali ngalesi sihlava sokufumbathisa lapho egunyaza ukuthi amalungu e-FIFA Exco ngonyaka ka-10 akhokhelwe.
Kodwa-ke ushiye ngemuva imali yomholo ka-R18million walo mqhudelwano, nokuyimali engafakwanga kwisabelomali sango-2015-2016 esasivunyelwe ngoJuni 2015 kanti futhi njengoba inkampani yezentengiso ye-CAF iLagardere Sports yayingakwazi ukuthola umxhasi oyedwa kulokhu. Izinkampani zaseNingizimu Afrika eziyi-100 ababesondele kuzo.
Kumele kwaziwe ukuthi ezinkampanini ezingama-20 eziphezulu zase-Afrika, okungenani uhhafu uvela eNingizimu Afrika, futhi kuzo ukuthi zenqabe ukuhlangana neSAFA kanye nomqhudelwano we-futsal, njengoba kwenzeka, emuva kwezinsolo zokufumbathisa nezokudlwengula ezibhekene nazo UJordaan, uyaxoxa impela.
Angawaqamba amanga futhi afihla iqiniso ngama-PRum (njengokuzama ukuveza izinsolo zokudlwengula kuSihlalo wePSL u-Irvin Khoza) kodwa ngokusobala, izinkampani ezinkulu bezingayithengi.
Futhi bakhuluma ngemali yabo!
Siyakuzonda ukuvuma lokho kepha iFIFA isisusile ngempela isinqumo sokukhethwa kukaWalter Nyamilandu (esikhundleni sikaDanny Jordaan) esihlalweni soMkhandlu weFIFA we-Anglophone Africa, ngoba kungenzeka ukuthi uJordaan wayezoveza ubuhlanga bakhe nokungafundeki kwezezimali eqenjini elibusayo kakade ukugxeka ezenzweni zokuphakama kweSG Fatma Samoura nenqubomgomo esemthethweni yenkohliso nguMongameli wayo uGianni Infantino.
Futhi yeka ukuthi kulihlazo kanjani lelo hlanga labantu abaxubile baseNingizimu Afrika, njengoTrevor Noah odumile, ukuthi uJordaan usavunyelwe ukuba sezandleni zebhola laseNingizimu Afrika, ngemuva kokuthi izinsolo zokudlwengula nezokufumbathisa zimenze waba mncane, kepha usebenzisa ubuhlanga ukugcina ubumbano. emandleni.
I-ARGENTINA: ISIQALO SE-GIANNI INFANTINO SOKUTHENGA KOKUTHOLAKALA NOKUTHENGA KWAMANDLA
IZWE LIZOTHOLA KONKE UKUTHOLA UMCULO KUSIZO LWEFIFA?
ISITHEMBISO SEBILITY: I-INFANTINO yayingenaso isisusa sokuphindisela ...
UKUKHETHA KWESI-2021: ISAKHIWO ESIFANELEKILE NOMA UBUFAKAZI ...
I-EMILIO GARCIA SILVERO: HLANGANA NOMUNYE USETSI KU ...
ISIKHATHI SIFikile KOKUQALA KWOKUCABANGELA I ...
I-UEFA neCONMEBOL BATHA ISIHLANGANO ESISHA SOKUXHUMANA ...
UKUHLANGANISELWA KWAMALUNGISELELO NGESITHUTHA SE-DANNY JORDAAN KANYE NOKUZALWA KWAKHE ...
O D DJY JORDAAN, KUFANELE UYA ...
UKUQINISEKISWA KWE-GIANNI INFANTINO: EKENYA - "ABABUTHAKA & ...
IGIANNI INFANTINO IMFUNO: KUNGANI IKENYA KE EBALULEKILE KU ...
UKUGCINWA KWE-GIANNI INFANTINO: ICALA LENKENYA-TRINIDAD & TOBAGO ...
NGABANI OBUYOPHELA IVOTI LOKUQINISEKISA KU ...
UBULUNGISA BESISEZO BUZOBUYELA KUFIFA ...
EBANANA RepublicIC: I-SWITZERLAND IQHAZA UKUZEhlisa ISITOLO SAMAHHALA ...
IZWE LIZOTHOLA KONKE UKUTHOLA UMCULO ...
I-ARGENTINA: IGIANNI INFANTINO'S THEATER YE-ABSURD & ...
#CAFPwCAuditReport: INDLELA YOKUFAKA ISIKHUNGO SANGAPHAKATHI KWE-AHMAD IBHEDLISWE KWEZIMALI EZINGAMA- $ 24 MILLION CAF
UFOUZI LEKJAA UNGENZA UMPROFESI WESIFUNDAZU SESIFISO SE-CAF
Icala Lezinganekwane Namazinga Aphindiwe eFIFA: Kalusha Bwalya vs Michel Platini
U-Isha Johansen: I-FIFA Ayivumeli Umoya We-Madman Foday Sankoh Ahambe eSierra Leone
ISIQINISEKISO SE-AHMAD: ISIVIVINYO ESIPHELELELELE SESI SITOLO SE-TRAGIC
UKUKHANGELA UHLU LOKUFUNDA
Izinzipho zomhleli (15)
@ 2019 - Konke Kulungile Kugcinwe.
UKUZIVA UKUZIVIKELA, I-FIFA MANJE IMIPHUMELA YOKUVULA ...
U-ALMAMY KABELE CAMARA: UZOBANGELA GUINEA USEDULE ...
ISITOLO SEFIFA: INFANTINO KANYE NEMFAZWE YAKHE NGEN ...